Budget Policies & Procedure — Win Thein & Sons Co., Ltd
BUDGET POLICY AND PROCEDURE
- (22.11.2013) တွင် Budget ထုတ်ယူခွင့် ရရှိထားသူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် Budget Policy နှင့် Procedure များအား အောက်ပါအတိုင်း ရုံးမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
၁။ Format မှန်ကန်မှုရှိရန်
၃။ အသုံးစရိတ်အား မှန်ကန်စွာ Review ပြုလုပ်ရန်
၄။ ပြေစာ၊ အထောက်အထား ပြည့်စုံစွာပူးတွဲထည့်သွင်းပေးရန်
၇။ သက်မှတ်ရက်အတွင်း Budget/Claim အချိန်မီ ပြုလုပ်ရန်
၈။ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော အသုံးစရိတ်များအတွက် သီးခြားတင်ပြတောင်းခံရန်
၁။ Format မှန်ကန်ခြင်း
အသုံးစရိတ်ထုတ်ယူ၊ ရှင်းလင်းရာတွင် စာရင်းဇယားများမှန်ကန်မှုရှိစေရန်အတွက် MD ကိုယ်တိုင် ပုံစံချပေးထား သော နောက်ဆုံး Format ကိုသာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာများထည့်သွင်းရာတွင် -
D> စာကြောင်းများ အစီစဉ်တကျရေးသားရမည်
A> မိမိအသုံးစရိတ်အား Expense/Asset သက်မှတ်ပေးရမည်..
B> Expense တွင် (ကားခ၊ ၀န်ဆောင်ခ၊ မီတာဘေလ်၊ ဖုန်းဘေလ် နှင့် ပေးချေရန်အသုံးစရိတ် စသည်တို့ပါဝင်သည်)
C> Asset တွင် ( ၀ယ်ယူထားသော ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကာလရှည်သုံးစွဲနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ ဥပမာ..အိမ်၊ ကား၊ စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်၊ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် သဘောတရားတူညီသည့် ပစ္စည်း ၀ယ်ယူခြင်းများ ပါဝင်သည်။)
မိမိထုတ်ယူလိုသည့် အသုံးစရိတ်ခေါင်းစဉ်များအားပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းဖော်ပြရပါမည်။ အသေးစိတ်သိရှိပါက ထည့် သွင်းရေးသားနိုင်ပါသည်။
A> သုံးစွဲမည့် အကြောင်းအရာ၏ အမျိုးအစား၊ အချိန်ကာလ၊ သုံးစွဲမည့်နေရာအား ဖော်ပြပေးရန်။
Budget မတင်မီအချိန်တွင် လိုအပ်သော အသုံးစရိတ်များအား Review ပြုလုပ်၍ အနီးစပ်ဆုံး တင်ပြပေးရန် လိုအပ် ပါသည်။ ထပ်မံထုတ်ယူရန် ပေါ်ပေါက်လာပါက ဒုတိယလပတ် Budget တွင်သာ တင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းကြန့်ကြာမှုမရှိစေရန် Budget မတင်မီကတည်းက လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ စုစည်း၍ ၁၅ ရက်စာ အသုံးစရိတ်အား ထုတ်ယူခွင့်တောင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သက်မှတ်ရက်ပြည့်ပြီးနောက် သုံးစွဲပြီး စရိတ်၊ ပိုငွေများအား ပြန်လည်အပ်နှံရာတွင် Budget ထုတ်ယူစဉ်က တင်ပြ ထားသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဘောက်ချာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပြောစာများ၊ Bank Statement၊ Cheque မိတ္တူများနှင့် ဘောက်ချာမရရှိသော အသုံးစရိတ်များအတွက် မှတ်ချက်ရေးသားပူးတွဲပြီး ပြန်လည်ရှင်းလင်း တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးစရိတ်အား တင်ပြထားသည့် ခေါင်းစဉ်များအတွက်သာ သုံးစွဲခွင့်ပြုပါမည်။ တင်ပြထားခြင်းမရှိသော အကြောင်း အရာများပေါ်ပေါက်လာပါက ၄င်းကိစ္စနှင့်မသက်ဆိုင်သောအသုံးစရိတ်မှ အစားထိုးသုံးစွဲခွင့် လုံးဝခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသည့်အသုံးစရိတ်များ သုံးစွဲရန်မလိုခြင်း၊ လိုအပ်သည်ထက်ကုန်ကျမှုမရှိခြင်းနှင့် သုံးစွဲရန် အချိန်မလုံ လောက်သော အသုံးစရိတ်များအား သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်အလိုက် ပိုငွေပြန်လည်အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ် ကြိမ် Budget တင်မှသာ မသုံးဖြစ်သေးသော အသုံးစရိတ်များအားထပ်မံထုတ်ယူခွင့်ပြုပါမည်။
တင်ပြထားခြင်းမရှိသော အသုံးစရိတ်များအားသုံးစွဲခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းကြောင် တင်ပြထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စများတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း၊ စာရင်းရှင်းလင်းရာတွင် ရှုပ်ထွေးစေခြင်းများနှင့် အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များ ထပ်မံအစား ထိုးခြင်းများအား လုံးဝခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
Budget တင်ရာတွင် Cover, Details စာမျက်နှာများတွင် လက်မှတ် ၊ အမည်၊ နေ့ရက်၊ ရာထူး၊ ဌာန ပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်း ရေးထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်း၊ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ခွင့်မပြုပါ။
Budget ထုတ်ယူခြင်း၊ Claim ပြုလုပ်ခြင်းအား တစ်လနှစ်ကြိမ်သာသက်မှတ်ထားပါသည်။ Direct Budget တင်ခွင့်မရှိ သည့်အတွက် အရေးပေါ် သုံးစွဲရန် ပေါ်ပေါက်လာပါက သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်အမျိုးအမည်အား စာကိုယ်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြ၍ ရောက်ရှိနေသည့် Budget ကာလနေ့ရက်အား ထည့်သွင်း၍ ထုတ်ယူခွင့်တောင်းခံရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ အကြောင်းအရာတွင် "Budget" အရေးအသား လုံးဝထည့်ခွင့်မပြုပါ။
၈။ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော အသုံးစရိတ်များအား ပြန်လည်ပေးလျော်ရန်
A> သက်မှတ်ရက်အတွင်း Budget မတင်ခြင်း ၊ အချိန်မီ Claim မပြုလုပ်ခြင်း
C> အကြောင်းအရာများ အတိုးအလျော့ပြုလုပ်ခြင်း
E> Format မမှန်ကန်ခြင်း
H> မလိုအပ်သောကိစ္စများအတွက် သုံးစွဲထားခြင်း
စသည့်အချက်များတွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ Budget ထုတ်ယူသူ တာဝန်ခံအား Budget Policy အတိုင်း ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိသော အသုံးစရိတ်များအား ပြန်လည်ပေးလျော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အမိန့် ချမှတ်လိုက်သည်။
(Budget Policy အား အိမြတ်မွန်ဦးသို့ WTSC BUDGET POLICIES AND PROCEDURES 10112015 email subject ခေါင်းစဉ်ဖြင့် (1.12.2015) ရက်နေ့တွင် လွှဲပြောင်းပေးထားပါသည်။)
BUDGET CURRENT ACCOUNT များ
- Budget Account မှ မှတ်ပုံတင်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ငွေသားထုတ်ယူခွင့် လုံးဝမရှိပါ။
- အသုံးစရိတ်ပေးချေရန် (သို့) Budget ထုတ်ယူရန်ရှိပါက KBZ Bank တွင် current account သစ် ဖွင့်လှစ်ရပါမည်။ အဆိုပါ current account သည် WTSC လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ငွေအသွင်း/အထုတ်များ ပြုလုပ်ရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အခြားပြင်ပကိစ္စရပ်များ, personal အသုံးပြုမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း မရှိစေရပါ။
- မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ အလုပ်လက်ခံဆောင်ရွက်သည့် supplier များ၊ contractor များ၊ auditor များသည်လည်း KBZ Bank တွင် current account ဖွင့်လှစ်ထားမှသာ အဆိုပါ account သို့သာ တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
>>SOFT COPY - current account စာရင်းများအား (1-12-2015) ရက်နေ့တွင် e-mail ဖြင့် ပေးပို့ လွှဲပြောင်းထားပါသည်။
Budget Advance များ လက်ခံစစ်ဆေး၍ ထုတ်ပေးခြင်း
- ဌာနအသီးသီးမှ မိမိတို့ဌာနအတွက် လိုအပ်သည့် အသုံးစရိတ်များအား သတ်မှတ်ထားသည့် format ဖြင့် ခေါင်းစဉ်များခွဲ၍ သုံးစွဲမည့် အကြောင်းအရာအသေးစိတ်အား ဖော်ပြ၍ Budget Advance အား Budget ဌာနသို့ တင်လာပါသည်။
- Budget ဌာနမှ ၎င်းလျှောက်လွှာများအား register တံဆိပ်တုံးနှိပ်၍ Budget Register စာအုပ်တွင် စာရင်းရေးသွင်းပါသည်။
- အသုံးစရိတ်အသေးစိတ်အား departmental budget advance ဇယားတွင် ခွဲခြား၍ စာရင်းရေးသွင်းခြင်း။
>>SOFT COPY - Departmental Budget Expense for each person.xlsx တွင် မျိုးသန္တာမှ ပုံမှန် စာရင်းရေးသွင်းပါသည်။
- တင်ပြလာသည့်အသုံးစရိတ်များအား budget policy နှင့် ညီ/မညီ၊ အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန် လိုအပ်/မလိုအပ်၊ အမှန်တကယ် ကုန်ကျမည့်ပမာဏထက် ပိုမိုခြင်း ရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း။ အချို့မရှင်းလင်းသည့် အသုံးစရိတ်များ တင်ပြလာခြင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ budget တင်သူထံ ပြန်လည်မေးမြန်းစုံစမ်း၍ MD ထံသို့ တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံပါသည်။
- ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက (၁၅)ရက်စာအသုံးစရိတ်အတွက် တင်ပြထားသည့် ငွေပမာဏနှင့် သုံးစွဲမည့် အချိန်တို့နှင့် ချင့်ချိန်၍ အသုံးစရိတ်များအား အကြိမ်ခွဲ၍ budget တင်သူ၏ current account သို့ လွှဲပြောင်းပေးပါသည်။
- ခွင့်ပြုပေးသည့် အသုံးစရိတ်ခေါင်းစဉ်နှင့် ငွေလွှဲပေးသည့် ပမာဏကို လွှဲသည့်နေ့ရက်တွင် Budget တင်သူထံသို့ အကြောင်းကြားပေးပါသည်။
Nay Zin Min Logistics Budget
- NZM လုပ်ငန်းခွဲအတွက် Budget ကာလမှာ (၁)လဖြစ်ပါသည်။
- နေဇင်မင်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ Budget တာဝန်ခံမှ Budget များအား MD ထံသို့ တိုက်ရိုက်တင်ပြခွင့်ပြုမိန့် ရယူပါသည်။
- လကုန်ရက် Budget ပိတ်သည့်ကာလတွင် Nay Zin Min Logistics Budget တာဝန်ခံမှ NZM Budget Account များအားလုံး၏ တစ်လအတွင်း အသုံးစရိတ်စာရင်းရှင်းတမ်းအား ပေးပို့ ရှင်းလင်းရပါမည်။
External Contractor, External Auditor, Shipping Agent, SSB Fees
- Direct Budget များဖြစ်သည့် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် အလုပ်အပ်နှံသည့် external contractor များ, External Audit Firm များနှင့် ဆိပ်ကမ်းမှ ပစ္စည်းထုတ်ခြင်းအတွက် Agent သို့ အပ်နှံဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် Agent ခများပေးချေခြင်း၊ မကြီးယင်းမာ budget စသည်တို့အတွက် ၎င်းတို့၏ current account သို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးရပါသည်။ current account ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိသည့် ဆိုင်ခန်းခပေးချေခြင်း၊ SSB (လူမှုဖူလုံရေးကြေး)နှင့် အခြား ဘဏ်ကိစ္စအတွက် RK ပေးခြင်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးရပါသည်။ ၎င်း cheque အား မိတ္တူကူးယူခြင်း၊ လက်ခံရရှိသူအား debit တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
- Agent ခပေးချေခြင်းအတွက်ကိုမူ ပစ္စည်းထုတ်ယူပြီးစီးပါက Agent မှ Bill တင်လာ၍ ၎င်းကို မထိုက်မှ စရိတ်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်မှသာ Budget ဌာနသို့ ပေးချေနိုင်ရန်အတွက် Bill ပေးပို့ပါသည်။ Budget ဌာနမှ Agent သို့ ၎င်းပစ္စည်းထုတ်ယူခြင်းအတွက် ကြိုတင်ငွေပေးချေထားခြင်းနှင့် Bill များအား ထပ်ဆင့်စစ်ဆေးပြီး ကျန်ငွေလွှဲရမည့်ပမာဏအားဖော်ပြ၍ MD ထံသို့ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံပြီး လွှဲပြောင်းပေးချေရပါမည်။
HO Budget ပိတ်ခြင်း
- လစဉ် (15)ရက်နေ့နှင့် (30/31)ရက်နေ့များတွင် HO Budget (045 1010 600 2789701) ၏ ငွေလက်ကျန် 1500/-ချန်၍ ပိုငွေများအား Settlement Account သို့ ထည့်၍ HO Budget ပိတ်ပါသည်။
- (15)ရက်နှင့် (30/31) ရက်နေ့များသည် ဘဏ်ပိတ်ရက် စနေ-တနင်္ဂနွေနေ့များဖြစ်ပါက ဘဏ်ပြန်ဖွင့်သည့်နေ့ရက်တွင် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- (1) ရက်နေ့မှ (15)ရက်နေ့အထိ 1500/- ကျန်သည်အထိ bank statement အား ထုတ်ယူပါသည်။
- bank statement နှင့် cheque register book များ၊ budget တင်ထားသည့် စာရင်းများ၊ ရှင်းတမ်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ ရှင်းတမ်းအချုပ်စာရင်းအား MD ထံသို့ e-mail ဖြင့် Budget ကာလတိုင်း ပေးပို့တင်ပြ ရှင်းလင်းပါသည်။
>> HARD COPY HO Budget Account Statement Summary အား (15-5-2014) မှ (7-12-2015) ထိ Budget ကာလတစ်ခုချင်းအလိုက် စာရင်းရှင်းတမ်းအချုပ်အား bank statement မူရင်းနှင့်ပူးတွဲ၍ Box File အနက်ရောင်ဖြင့် တွဲထားပါသည်။
(မျိုးသန္တာသို့ 16.12.2015 ရက်နေ့တွင် လွှဲပြောင်းပေးထားပါသည်။)
>> SOFT COPY HO Budget Account Statement Summary အား (15-5-2014) မှ (7-12-2015) ထိ Budget ကာလတစ်ခုချင်းအလိုက် စာရင်းရှင်းတမ်းများအား Folder တစ်ခုချင်းစီဖြင့်ခွဲ၍ excel စာရင်း ပြုလုပ်ထားပါသည်။ MD ထံသို့လည်း စာရင်းပိတ်တိုင်း e-mail ဖြင့် report ပြုလုပ်ထားပါသည်။ (SOE SOE >HANDOVER LIST>1.HO Budget Summary အောက်တွင် date အလိုက်ခွဲထားသည့် Folder 34 ခု ရှိပါသည်။)
Department Budget ပိတ်ခြင်းနှင့် Budget Claim Form များ လက်ခံစစ်ဆေးခြင်း
- ၎င်းနေ့ရက်နှင့် တပြိုင်တည်း ဌာနအသီးသီးမှ Budget ထုတ်ယူသုံးစွဲသူများကလည်း သုံးစွဲထားမှုများအား ရှင်းတမ်းတွင်ဖြည့်စွက်ပြီး ပိုငွေရှိပါက မိမိတို့ account သို့ ငွေသားပြန်လည် ထည့်သွင်းပြီး ၎င်းမှတဆင့် Settlement Account (014 1010 600 2789701) သို့ cheque ဖြင့် transfer ပြုလုပ်လွှဲပြောင်းရပါသည်။
- Budget Claim Form နှင့်အတူ သုံးစွဲမှုအတွက် ပြေစာအထောက်အထား voucher မူရင်းများ၊ debit များ၊ ၎င်းတို့ account ၏ bank statement မူရင်းများအား ပူးတွဲ၍ Budget ဌာနသို့ ရှင်းတမ်းပေးပို့ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
- ဌာနအသီးသီးမှ တင်ပြလာသည့် Budget claim များတွင် voucher များနှင့် သုံးစွဲထားသည့် အထောက်အထား၊ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ၊ တင်ပြထားသည့် အသုံးစရိတ်မဟုတ်ဘဲ ပြောင်းလဲသုံးစွဲမှုရှိ/မရှိ၊ bank statement များပါ/မပါ စစ်ဆေးခြင်း။
- Claim များပြည့်စုံစွာ ရောက်ရှိပြီးပါက အောက်ပါအတိုင်း budget တင်သူတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် department budget များခွဲခြား၍ စာရင်းရေးသွင်းပါသည်။
1. ဦးခင်မောင်လတ် - Admin Department အသုံးစရိတ်၊ diesel/petrol အသုံးစရိတ်၊ ရုံးကားများ ပြင်ဆင်ခြင်း အသုံးစရိတ်၊ ၀န်ထမ်းများလစာပေးခြင်းစရိတ်
2. မေသဇင်နွယ် - ကြွေးကောက်ဝန်ထမ်းများ အသုံးစရိတ်
3. မမာလာရီ - နေပြည်တော်တွင် လိုင်စင်လျှောက်ခြင်း၊ စာပို့ခြင်း၊ မင်းထွန်းသန့်အသုံးစရိတ်
4. ဒေါ်ထိုက်ထိုက်ဦး - Iron & Steel HO အသုံးစရိတ်၊ custom duty နှင့် agent fees များ
5. မခင်ထွေးမော် - warehouse & logistics အသုံးစရိတ်
6. ဦးမောင်မောင်မြင့် - BYN ဆိုင်၏ အသုံးစရိတ်
7. ဦးမောင်မောင်မြင့် - မူဆယ်မှ ပစ္စည်းသယ်ယူခြင်းကုန်ကျစရိတ်
8. အေးမင်း - Iron & Steel (တောင်ဒဂုံ) ၏ အသုံးစရိတ်
9. ဒေါ်ညိုညိုမြင့် - Iron & Steel (စော်ဘွားကြီးကုန်း) ၏ အသုံးစရိတ်
10. ကိုထွန်းအောင်စိုး - ကားလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအသုံးစရိတ်
11. ဖြူဖြူဝင်း - MDY SYM Autoparts အသုံးစရိတ်
12. အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းများအတွက် external contractor များသို့ တိုက်ရိုက်ပေးချေခြင်းအသုံးစရိတ်
13. ဆိပ်ကမ်းမှ ပစ္စည်းထုတ်ခြင်းအတွက် agent သို့ PO သွင်းရန်နှင့် ဆိပ်ကမ်းရှင်းလင်းခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များပေးချေခြင်း။
Settlement Account ပိတ်ခြင်း
- ဌာနအားလုံးမှ ရှင်းတမ်းများပြည့်စုံစွာရောက်ရှိ စာရင်းရှင်းလင်းပြီးပါက Settlement Account (014 1010 600 2789701) account တွင် လက်ကျန် 1500/- ချန်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် account သို့လွှဲပြီး စာရင်းပိတ်ပါသည်။
- settlement account ၏ bank statement အားထုတ်ယူ၍ Budget တင်သူများမှ ပိုငွေလွှဲပြောင်းထား မှုများအား တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါသည်။
HO Budget မှ Advance များပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
- Settlement account ပိတ်ပြီး ဌာနနှင့် လုပ်ငန်းခွဲအားလုံးမှ ပြည့်စုံ/မှန်ကန်စွာ စာရင်းရှင်းလင်းပြီးမှ နောက် Budget အတွက် Advance တင်ထားမှုများအား စစ်ဆေး၍ MD ထံ ခွင့်ပြုချက်တင်ပြရပါမည်။
Daily Bank Transaction
- MD ၏ အမည်ဖြင့် ဖွင့်ထားသည့် KBZ Bank, Yoma Bank, MOB Bank များရှိ account များအား ဘဏ်ဖွင့်ရက် (တနင်္လာမှ သောကြာနေ့) အထိ နေ့စဉ် နံနက်တိုင်း ဘဏ်ငွေလက်ကျန်များအား ဖုန်းဆက်မေးမြန်း ရပါမည်။ စုစုပေါင်း account (50) ခန့်ရှိပါသည်။ ၎င်း account များထဲမှ transaction ရှိသည့် A/C များသာ မေးမြန်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
- ပုံမှန် Daily Transaction ရှိသည့် A/C များမှာ-
- SYM Autoparts income များသွင်းသည့် KBZ (Bayint Naung Branch) 005 1010 600 2789701
- WAP Autoparts income များသွင်းသည့် KBZ (Thingan Gyun Branch) 027 1010 600 2789701
- Iron & Steel income များသွင်းသည့် KBZ (South Dagon Branch) 068 111 000 2351
- Yoma Bank Call Deposit Account (KTDA Branch) 02021500079-2
- NZM Logistics income များသွင်းသည့် KBZ (Mandalay Lan 80 Branch) 063 1010 600 2789 701
- HO Budget account KBZ (Botahtaung Branch) 045 1010 600 2789701
- ဦးမောင်မောင်မြင့်နှင့် သူရိန်ထွန်းတို့ထံမှ Autoparts အတွက် local purchase budget များ တင်ပြလာပါက သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း၊ voucher များ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပြီး၊ Local purchase budget excel file တွင် စာရင်းရေးသွင်းရန်။ ပေးချေရန် due date စေ့သည့်နေ့တွင် ၀ယ်ယူသည့် ဆိုင် KBZ Account (သို့) မှတ်ပုံတင်ဖြင့် လွှဲပေးရန်။ ၎င်းစရိတ်လွှဲရန်အတွက် income account များမှ SYM (Local Purchase) KBZ (Kantawkalay Branch) ထဲသို့ လွှဲရန်လိုအပ်သည့် ပမာဏအတိုင်းသာ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
o KBZ Mingalarzay Branch (6255 Account) နှင့် အခြား other income account
- Budget မှ သုံးမည့်အသုံးစရိတ်ပမာဏအား ချိန်ဆ၍ သတ်မှတ်ထားသည့် Income Account များမှ Budget Account သို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်း။
- Income Account များမှ ငွေများအား 6255 သို့ လွှဲပြောင်းထည့်သွင်းရန်အတွက် cheque များ ရေးသား စီစဉ်ခြင်း။
- Cheque Register (Manual) ရေးသွင်းခြင်း၊ excel တွင်လည်း စာရင်းရေးသွင်းခြင်း။
- တစ်လတစ်ကြိမ်နှင့် လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် bank statement များ ထုတ်ယူခြင်း။
- Cheque စာအုပ်ကုန်လျှင် အသစ်ထုတ်ရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ကုန်သည့် cheque စာအုပ်များ အား serial number စဉ်အလိုက် စစ်ဆေး သိမ်းဆည်းခြင်း။
- ငွေလွှဲပြောင်းပြီးပါက ဘဏ်မှ ပြန်လည်ရရှိသည့် bank transaction note များအား ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ ခွဲခြား သိမ်းဆည်းခြင်း။
- ဦးမောင်မောင်မြင့်နှင့် သူရိန်ထွန်းတို့ထံမှ တင်ပြလာသည့် Local Purchase (Autoparts) များအား voucher များနှင့် warehouse မှ stock received နှင့် မထိုက်တို့ထံမှ MBC တွင် ရေးသွင်းပြီးသည့် purchase order များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ credit due date စေ့သည့်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဆိုင်၏ current account (သို့) မှတ်ပုံတင်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- သက်ဆိုင်ရာ ဆိုင်သို့ လွှဲပြောင်းပြီးကြောင်း ငွေလွှဲရန်တင်ပြသူထံ မည်သည့် voucher အတွက် လွှဲပေးလိုက် ကြောင်းကို အကြောင်းပြန်ကြားပေးခြင်း။
- Local purchase excel file တွင် စာရင်းရေးသွင်းခြင်း။
- MD’s account များ၏ cheque အသုံးပြုမှုများအတွက် account တစ်ခုလျှင် cheque serial number အလိုက် cheque register book တွင် စာရင်းရေးသွင်းပါသည်။ တစ်လတစ်ကြိမ် account များ၏ bank statement များ ထုတ်ယူ၍ excel cashbook တွင် စာရင်းရေးသွင်း၍ MD ထံ စာရင်းပိတ် ပေးပို့ပါသည်။
- ၎င်း account များတွင် SYM (BYN) 005 1010 6002789701, WAP (TGN) 027 1010 6002789701, တို့၏ cashbook အား မေသဇင်နွယ်တို့ Debtor Control Department မှလည်းကောင်း၊ NZM (MDY) 063 1010 6002789701၏ cashbook အား ကိုထွန်းအောင်စိုးတို့ဌာနမှလည်းကောင်း, I&S (SDGN) 0681110002351 နှင့် Yoma Bank 02021500079-2 ၏ cashbook အား မထိုက်တို့ဌာနမှလည်းကောင်း စာရင်းဖြည့်သွင်းပါသည်။
Budget Policies & Procedure